Noho ny tetikasa Tafita: nitombo ny fahaizan’ny mpianatra, nahomby ny fitantanana ny sekoly - ewa.mg
News - Noho ny tetikasa Tafita: nitombo ny fahaizan’ny mpianatra, nahomby ny fitantanana ny sekoly
Sekoly iray anisan’ny nanaporofo ny fahombiazan’ny tetikasa Tafita ny EPP Ambohinambo Talatamaty. Nohazavain’ny talen’ity sekoly ity fa niakatra ny taham-pahaizan’ny ankizy (T2 hatramin’ny T5) kajy sy vakiteny, rehefa nampiharin’ny mpampianatra azy ireo ny paikady vaovao. Tsy inona izany fa ny fanazavana amin’ny alalan’ny fitaovana mora hitan’ny ankizy, nandritra ny ora fanampiny, izany hoe, ankoatra ny tapany maraina efa voarafitry ny fandaharam-pianarana ofisialy.
Nanomboka ny volana mey hatramin’iny volana jolay iny, manomboka amin’ny 2 ora hatramin’ny 5 ora ary intelo isan-kerinandro, izany ora fanampiny izany. Ankoatra ny fampiasana fitaovana tsotra sy mora hita, tsy mijanona eo ambony dabilio sy miatrika solaitrabe ny mpianatra fa atao toy ny lalao, miala amin’ny mahazatra, ny fampitana ny fahalalana.
Tetsy ankilan’izay, vokatry ny tetikasa Tafita hatrany, mazava sy mahomby kokoa ny fitantanana ny sekoly. Tsiahivina fa, nanomboka ny taom-pianarana 2016-2017, ny fiaraha-miombon’ezaka ho fanatsarana ny fanabeazana ifotony (Feffi) ny rafitra mitantana ny sekoly (EPP). Demokratika kokoa ity rafitra ity, ahitana « assemblée générale » ka voafidy ny filohany, ny birao maharitra (ahitana mpitambola sy mpanolotsaina) ary ny rafitra mpanara-maso.
Rafetina, mandritra ny fivorian’io « assemblée générale » io, amin’ny fiandohan’ny taom-pianarana, ireo asa hotanterahina ao amin’ny sekoly. Ho an’ny EPP Ambohinambo, io no nandany ny tokony hanatanterahana ora fanampiny amin’ny fampianarana ka nahazoana izao vokatra tsara izao.
Teo amin’ny fitantanana ny sekoly, mazava sy ampahafantarina ampahibemaso (eo anatrehan’ny ray aman-dreny), toy ny natao omaly teny amin’ny EPP Ambohinambo, ny zava-bita sy ny fandaniam-bola tamin’izany, hatramin’ny mahakasika ny fampandehanan-draharaha ao amin’ny sekoly.
Nitondra tohana betsaka ny governemanta japoney
Tanjon’ny tetikasa Tafita ny hampitombo ny isan’ny zaza miditra an-tsekoly sy ny famitan’izy ireo hatramin’ny farany ny fianarana, ny hanatsara ny kalitaon’ny fianarana sy ny fitantanana ny sekoly. Manohana teknika ity tetikasa ity ny governemanta japoney, amin’ny alalan’ny antokon-draharaha iraisam-pirenena misahana ny fiaraha-miasa japoney (Jica).
Misitraka ny tetikasa ny faritra Analamanga sy Amoron’i Mania. Mizara roa ny fanohanan’ny Jica ka voalohany ny fanampiana ny fametrahana ny Feffi, efa tafapetraka amin’ny 99%-n’ny sekoly eto Analamanga ary 100% kosa ny any Amoron’i Mania. Nanampy tamin’ny fanofanana ireo rantsamangaikan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ihany koa ny Japoney.
Nanomboka tamin’ireo tale isan-tsokajiny eo anivon’ny minisitera ka hatramin’ny mpampianatra. Niompana tamin’ny fitantanana ny fiofanana. Nisy koa ny paikady fampianarana, mahakasika ny famakiana teny malagasy sy ny kajy. Ho tapitra amin’ny volana mey 2020 ny tetikasa Tafita ka anjaran’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ny manohy ireo voka-tsoa avy amin’izany.
L’article Noho ny tetikasa Tafita: nitombo ny fahaizan’ny mpianatra, nahomby ny fitantanana ny sekoly a été récupéré chez Newsmada.
CIGEPS: filoha vehivavy voalohany Rakotozafy Rosa
Tontosa ny 28 sy 29 septambra lasa teo ny fivoriana ara-potoana teo anivon’ny CIGEPS (Le Comité intergouvernemental pour l’éducation physique et le sport). Voafidy tao anatin’ity fivoriana ity ho filohan’ny CIGEPS i Madagasikara, amin’ny alalan-dRakotozafy Rosa, tale Jeneralin’ny spaoro, eo anivon’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena. Voninahitra lehibe ho an’i Madagasikara eto Afrika sy maneran-tany izany, indrindra, Rakotozafy Rosa no vehivavy filoha voalohany, hatramin’ny niforonan’ny CIGEPS, ny taona 1978. Tsiahivina, nisy ny fifanarahana hametrahana an’i Madagasikara ho filohan’ity komity ity ary nifanaraka fa hatao mifandraika amin’ny politikan’ny Unesco mahakasika an’i Afrika, eo ihany koa ny nanaovana ny kandida ho vehivavy dia i Tale Rosa, izay solontenan’i Madagasikara ka izao lany izao. Marihina, firenena 18 ao anatin’ny Unesco ny mandrafitra ny CIGEPS, ivondronan’ireo fikambanana anivon’ny firenena mikambana, ireo federasiona ara-panatanjahantena manan-danja ary ireo ONG. Misehatra eo amin’ny lafiny fanabeazana ara-batana sy ara-panatanjahantena ity komity ity.Nambaran-dRakotozafy Rosa fa tohin’ny kaonferansa voalohany natao teto amintsika, nanaovan’ny minisitra, i Tinoka fanoloran-tena tanteraka ka nahazoan’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, ny tompondakan’ny EPQ (Education Physique de Qualité), ny nahazoana ity toeran’ny filohan’ny CIGEPS ity.Tsara ny manamarika, firenena dimy ahitana an’i Finlande, Japon, Cuba, Tunisie ary i Bulgarie no voafidy ho filoha lefitry ny CIGEPS, nandritra ity fivoriana ara-potoana ity. Mi.Raz L’article CIGEPS: filoha vehivavy voalohany Rakotozafy Rosa a été récupéré chez Newsmada.
COVID-19: Statistique du 14 Septembre 2020
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Statistique du 14 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Selon le bilan quotidien de la porte parole du CCO, Pr Vololontiana sur la situation du Covid-19 à Madagascar, 12 nouvelles contaminations sur 506 tests ont été enregistrées ces dernières 24h. 9 de ces nouveaux cas sont localisés dans la région d’Analamanga, 2 nouveaux cas dans la région Antsinanana et 3 nouveaux cas dans la région de Boeny. Quant aux guérisons, 43 personnes sont guéries du Covid-19, le nombre de guérisons s’élève au total à 14 411. Par contre, 1143 personnes suivent encore des traitements dont 30 présentent des formes graves. Elle a également annoncé que deux personnes contaminées par le Covid-19 ont perdu la vie portant le nombre de décès liés au coronavirus à 213 dans la grande Île depuis mars 2020. Jusqu’à ce jour, Madagascar compte 15 769 cas confirmés. L’article COVID-19: Statistique du 14 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Basikety : nivoaka ny hopitaly Rabearivony Gilbert
Sitrana soa aman-tsara Rabearivony Gilbert, fantatry ny maro amin’ny anarana hoe i Gamin, “doyen” ny mpitsara lalao eo anivon’ ny federasiona malagasy ny basikety. Raha ny nambaran’ny mpikambana anivon’ilay komisiona ny mpitsara, nikarakara azy, tsy vita ny fitsaboana an’i Gamin raha tsy teo ny fanampian’ireo malala-tanana. Isan’izany ny FMBB, ny ligy, ny CCA, ny CRA, ny CEBB, ny mpitsara, ny mpanazatra, ireo klioba, ireo mpilalao, ny olon-tsotra, ny mpiara-monina, ny havana ary ny mpanao gazety. Nizara roa ny fanampiana ka nisy ireo nanampy azy nivantana ary nisy ireo tonga teto anivon’ny komisiona. Ni­tentina 1 099 000Ar ny vola voaray ary nampiasaina tamin’ny fikarakarana sy ny fitsaboana azy. Azo lazaina ho efa salama tsara i Gamin ankehitriny, saingy mbola misy anefa fanaraha-maso sy ny fitsaboana arahiny mandritra ny 15 andro, raha ny fanazavana hatrany. Hampi­asaina amin’ny fanafody mbola ilaina sy ny tohana sakafo ho azy, mandritra io 15 andro io, ny ambin’ny vola amin’izany.Mi.RazL’article Basikety : nivoaka ny hopitaly Rabearivony Gilbert a été récupéré chez Newsmada.
Fifidianana: hanazava ny ”Toky nomena” ny CFM
“Hanazavana amin’ireo kandidà solombavambahoaka miisa 803 momba ny tokony ho toetrana kandidà. Hanome toky izy ireo fa solombavambahoaka vanona, vonona, sahy sy mendrika, ary arakaraka izay no hitsaran’ny mpifidy azy ireo.” hoy ny filohan’ny Komitin’ny fampihavanana malagasy (CFM), i Maka Alphonse, teny Ampefiloha, omaly, momba ny fanombohan’ny fanazavan’ny eo anivon’ny CFM amin’ireo kandidà depiote isam-paritra ny “Toky nomena”, anio.Hisy fanaovan-tsonia amin’ny “Toky nomena”, mirakitra ny tokony ho fitondrantenan’ny kandidà mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana, indrindra ny toky homen’ny kandidà voafidy eo amin’ny fanatanterahana ny voalazany mandritra ny fampielezan-kevitra ataony.Fifanarahana fa tsy hifanerena ny “Toky nomena”Tsiahivina fa avy amin’ny komity iombonana iarahan’ny andry na rafi-panjakana ny “Toky nomena”. Anisan’izany ny Ceni, ny CFM, ny CNIDH, ny HCDDED, ny CSI, ny Bianco, ny Samifin. Eo ny avy amin’ny firaisamonina sivily: ny Tetikasa Fandio, ny TI-IM, ny ONG Tolotsoa, ny Justice et paix, ny Rohy.Noho ny fahabangan’ny lalàna ny “Toky nomena”: tsy lalàna na didim-panjakana izany ka hisy rafitra fitsarana na hisy sazy voalazan’ny lalàna hampiharina. Araka ny feon’ny fieritrertan’ny tsirairay io. Tokony ho adidy tanterahin’ny tsirairay avy izany amin’ny toe-tsaina malagasy fa tsy iandrasana lalàna sy fanasaziana: fahavononana ho olom-banona sy mendrika… Farafanaovan-tsonian’ny kandidà, ny 5 mey, mialoha ny fampielezan-kevitra. Ho hitan’ny mpifidy eo ireo tsy manao sonia?R.Nd. L’article Fifidianana: hanazava ny ”Toky nomena” ny CFM a été récupéré chez Newsmada.
Tetezan-dRamala Isotry: telo lahy tratra nanendaka vao maraina
Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’ny bo­riborintany fahefatra (CSP4) Isotry, ny asabotsy vao maraina teo teny amin’ny tetezan-dRamala, Isotry, ireo jiolahy telo lahy tratra teo am-panendahana mpiantsena. Polisy nanao fanamiana sivily ny nahatsikaritra ny asa ratsin’ireto jiolahy ireto ka nanenjika avy hatrany azy ireo. Nentina teny amin’ny kaomisarian’ny polisy izy ka tamin’ny fanadihadiana an-dry zalahy no nahafantarana fa efa mpanao asa fanendahana amin’iny faritra iny izy ireo. Mijery ny olona hoendahiny izy ireo ka mijery ny manodidina sao misy polisy mandalo, izay vao manao ny asa ratsiny, araka ny filazan’izy ireo tamin’ny polisy. Efa misy koa ny lalana miditra elakela-trano fitsoahan’ireto jiolahy ireto rehefa avy manao ny asa ratsiny. Tsy nampoizin’izy ireo anefa ny fisian’ireo polisy manao fanamiana sivily mody miantsena kanefa manara-maso ny faritra manodidina. Nandritra izany no nahasamborana ireto tontakely ireto rehefa avy nanendaka renim-pianakaviana iray.J.CL’article Tetezan-dRamala Isotry: telo lahy tratra nanendaka vao maraina a été récupéré chez Newsmada.
Emploi et services GESTIONNAIRE DE FLUX ANGLOPHONE (H/F)
Nous recrutons pour une structure anglophone : UN GESTIONNAIRE DE FLUX (H/F) Missions :Garantir l’ajustement des ressources et des infrastructures pour répondre aux engagements de la structure vis-à-vis des clients et dans un souci d’optimisation du modèle économique.- Construire des prévisions de staffing et planification en phase avec les engagements de production contractuels- Ajuster en fonction des flux réels- Suivre les process pour l’utilisation des outils informatiques de production- Faire des propositions d’amélioration en fonction des remontées et besoins terrain.- Fournir les reportings des données et KPI’s quantitatifs Profil :- Bacc+4 en economie, gestion, statistiques ou équivalent- Expérience en analyse de données, gestion de flux- Maîtrise des outils de gestion et prévision de données- Bonne capacité d’analyse et de synthèse- Bonne connaissance dans la dématérialisation de données- Bon niveau d’anglais- Sens des responsabilités, intérêts pour les résultats et l’atteinte des performances Pour postuler, veuillez nous envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) à recrutement@human-talent-consulting.com avec, pour objet du mail, la mention : " GESTFLU/1120 ". Merci de nommer votre CV par votre nom et prénomCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services GESTIONNAIRE DE FLUX ANGLOPHONE (H/F)".
Mpampianatra Fram non sub: misy fiantraikany amin’ny fampianarana ny tsy fandraisana karama
Manomana roa andro (21-22 janoary) handinihana ny olana miseho amin’ny tontolon’ny fanabeazana eto Madagasikara ny firaisankinan’ny sendikà Pasem-Fisemare-FimpaFram, amin’ny herinandro ambony, araka ny fanazavan’ny komity mpanomana ny hetsika, Rajoarihery Victor, omaly, teny Andravoahangy. Midika ho firaisana tsikombakomba ny fahanginana ka izay no antony hanaovana hetsika fanairana. Noho ny fandaminana kosa, tsy miato ny fampianarana fa solontena no alefa isaky ny sekoly amin’ny roa andro hivoriana. Ankoatra ny eto Antananarivo, mikarakara roa andro koa ny rantsana any amin’ny distrika sy ny faritra. Tsapan’ireo mpitarika sendikàn’ny fanabeazana fa tsy mitana ny teny nomeny ny mpitondra ka anisan’izany ny tokony hijerena manokana ireo mpampianatra Fram na vacataire na ECD mihoatra ny 45 taona nefa tsy mbola voaray ho mpiasam-panjakana, hatramin’izao. Miteraka olana koa ny fanambaran’ny fanjakana fa 0 ariary ny fampidirana an-tsekoly ny mpianatra amin’ity taom-pianarana ity. Miandry ny vola 91 000 Ar ho an’ny mpampianatra Fram (non sub) tsy mbola mahazo fanampiana avy amin’ny fanjakana ny EPP-CEG ary lycée, hatramin’izao. Efa nihaona tamin’ny mpitantana ny minisitera ny mpitarika ny sendikà momba ny fahataran’ny fanefana izany. Telo volana ihany no aloan’ny minisitera ka miandry fatratra izay ny mpanabe, niasa hatrany, hatramin’izao.Ho an’ny EPP Antanandrano manokana, 200 000 Ar isam-bolana ny karama nomena ireo mpampianatra Fram dimy non sub miasa ao aminy. Hatreto, ny talen-tsekoly sy ny mpampianatra mpiasam-panjakana no manao tsipaipaika natolotra ireo mpampianatra Fram nandritra ny fety roa sosona, hoy ny talen-tsekoly. Amin’ireo mpitarika sendikà, tsara ny fanafoanana ny vola hampidirana ankizy any an-dakilasy fa ny fepetra manaraka azy no tsy ampy ka miteraka olana. Lasa tsy milamin-tsaina ny mpanabe ka misy fiantraikany amin’ny mpianatra. Tsy nandray karama hatramin’ny novambra no ho mankatyMpampianatra Fram non sub ao amin’ny EPP Ambohipo i Sandrine, iray amin’ireo13 mampihodina ny fampianarana. Nanomboka ny taona 2016 izy no niasa tao ary ny taona 2018 vao nandray karama 80 000 Ar isam-bolana avy amin’ny fikambanan’ny ray aman-drenin’ny mpianatra. Niakatra ho 120 000 Ar isam-bolana izany, ny taona 2018-2019. Hatramin’ny volana marsa 2020 no ho mankaty, nidina ho 60 000 Ar isam-bolana ny karama ary tsy mbola nandray vola, ny volana novambra, hatramin’izao volana janoary izao. Miandry ny fanampiana nampanantenain’ny fanjakana izy hatreto fa manohy ny asa ihany aloha. Vonjy A.L’article Mpampianatra Fram non sub: misy fiantraikany amin’ny fampianarana ny tsy fandraisana karama a été récupéré chez Newsmada.
Nitondra fanazavana mikasika ireo raharaha manitikitika ny sain’ny mpanara-baovao ny Fiadidiana ny Repoblika. Tsy hisy aloha ny fandravana na fanovana ny governemanta. Hiatrika ny drafitra ho fanandratana an’i Madagasikara ihany koa izao…“Mbola ao anatin’ny programa fohy ezaka ny filohan’ny Repoblika, amin’izao fotoana izao, ny amin’ny fanovana governemanta. Noho izany, tsy hisy ny fanamboarana ny governemanta amin’ity volana janoary ity, araka ny resaka mandeha.” Io no nambaran’ny talen’ny kabinetran’ny fiadidiana ny Repoblika, Ranoromaro Lova Hasinirina, tamin’ny fihaonana voalohany tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny lapan’Iavoloha, omaly. Noho ny fahasahiranana teto amin’ny firenena tamin’ny fandalovana ny valanaretina covid-19.Amin’ny lafiny politika, hitantsika fa manomboka mahazo vahana ny fanakorontanana amin’ny lafiny rehetra. Nisafidy sy mifantoka amin’ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana sy ny hanao ho laharam-pahamehana amin’ny fanaovana fotodrafitrasa amin’ny fijerena indrindra ny sosialam-bahaoka ny fitondram-panjakana.Ho tonga amin’ny 22 janoary ny vary 550 Ar ny kapoaka“Efa manao ny ezaka rehetra ny minisiteran’ny Varotra sy ny indostria amin’ny fitadiavana vahaolana amin’ny vary”, hoy izy. Araka ny toromariky ny filohan’ny Repopblika, ho avy amin’ny 22 janoary izao ny vary 7 000 taonina nohafaran’ny fitondram-panjakana. Misy hatrany mpanararaotra ka hohamafisina ny ady amin’izy ireny. Hamidy 550 Ar ny kapoaka amin’io vary io.Tsy hanana indrafo ny “Raharaha volemana 73,5 kilao”Momba ny “Raharaha volemana 73,5 kilao”, izay mibahana eo amin’ny tontolon’ny serasera. Anisan’ny velirano nataon’ny filohan’ny Repoblika ny ady amin’ny kolikoly sy ny fanondranana an-tsokosoko harem-pirenena. Noho izany, tsy misy indrafo ho an’izay tratra manao an’izany. Efa na nanome toromarika ny filohan’ny Repoblika ny anenjehana izay rehetra voarohirohy amin’io raharaha io, na tompon’andraikitra ambony aza.Tsy ny fanjakana malagasy no nangataka vonjimaika an’ireo olona telo voatana any ny Afrika Atsimo, izay nolavin’ny fitsarana any an-toerana. Manohy ny asany an-kalalahana ny mpanao fanadihadiana.Tsy hisy fiverenana amin’ny fihibohanaManoloana ny fiakaran’ny tahan’ny olona mitondra tsimokaretina amin’ny faritra sasany: raha mitaha amin’ny any ivelany i Madagasikara, amin’izao fotoana izao, anisan’ny firenena atahorana. Hatramin’izao, diso tanteraka ary tsy mitombina ny filazana fa hiverina amin’ny fihibohana isika. Fanelezana vaovao tsy marina izany.Matoky ny fahatongavan-tsain’ny tsirairay: ezahina ny hanajana ny fepetra ara-pahasalamana efa nipetra hatramin’izay. Izay no ahazoana misoroka ny andininy faharoa amin’ny fihanaky ny covid-19. Mba manatona tobim-pahasalamana eo ho eo izay ahitana soritr’aretina, ezahina ny tsy hamoriana olona be loatra… Izay no ahazoana miaina an-kalalahana eto Madagasikara.Nasian-teny koa ny amin’ny famatsian-drano, ny fanomboaran-dalàna, ny fanorenana tanàna vaovao eny Imerintsiatosika… Ho isam-bolana ny fihaonana amin’ny mpanao gazety.R.Nd.L’article Fiadidiana ny Repoblika: tsy hisy fanamboarana ny governemanta a été récupéré chez Newsmada.
Maro ny faritra na ny kaominina mamokatra hitan’ny teknisianina nefa tsy ampy fikojakojana. Azo ambara ho faritra filamatra nefa tsy mitaky fandaniam-bolabe ny fanajariana tokony hatao aminy. Hita amin’izany, ohatra, ireo velaran-tany mora voatondraka sy volena, miantoka ny fahavitantena sakafo sy mampidi-bola. Olana anefa izao ny tsy fahampian-drano noho ny fiovan’ny toetr’andro. Maina ny tany, maro ny velarana tanimbary tototry ny fasika, simba ireo fotodrafitrasa nisy tany aloha.Mila mitohy ny fikojakojana ireo tany volena sy ny fanajariana izany amin’ny lafiny teknika. Hita izany any Andapa, faritra Sava; any Soanierana Ivongo, faritra Analanjirofo; any Bealanana, faritra Sofia; any Marovoay, faritra Boeny. Samy mamokatra betsaka ireo distrika ireo, raha ny vary fotsiny. Ankoatra izay, raha amin’ny ilany atsinanana, mbola misy ny lavanila sy ny jirofo, izay samy vokatra fanondrana.Nisy ny famatsiam-bola avy amin’ny Banky iraisam-pirenena, 65 tapitrisa euros; avy amin’ny AFD (1), 25 tapitrisa euros, efa azo avokoa ny momba ny tetikasa PADP (2) ho an’ireo distrika voalaza ireo. Nanampy izany ny avy amin’ny FEM (4), 13,7 tapitrisa dolara. Olana anefa, toa tsy misy ny fitohizan-draharaham-panjakana raha ny vokatra hita any amin’ireo toerana ireo amin’izao fotoana. R.Mathieu AFD (1) : Agence française de développementPADP (2) : Projet d’agriculture durable par une approche paysageFEM (3) : Fonds pour l’environnement mondial L’article Tsy ampy fikojakojana sy fanajariana nytany volena a été récupéré chez Newsmada.
“Henjanina kokoa ny sazy, satria betsaka ny tsy miraharaha ny tenany sy tsy miraharaha ny hafa: manadio tatatra, manadio fanariam-pako, manadio lalana… Be loatra ny tsy manara-dalàna” hoy ny prefet de Police, Antananarivo, ny jeneraly Ravelonarivo Angelo, omaly.Tokony ho samy tonga saina ny tsirairay, ho samy tompon’andraikitra amin’ny tenany sy amin’ny fitsinjovana ny hafa amin’ny fanaovana arovava. Aleo mihatra ny fepetra sakana amin’ny fihanaky ny covid-19 na aiza na aiza: any anaty taxi-be, any amin’ny tranom-panjakana… Aleo samy sarotiny amin’ireo fepetra ahazoana mifehy ny valanaretina.Mila fakana fahazoan-dalana ny hetsika rehetra ara-kolontsaina. Eo koa ny ara-pivavahana, raha tsy any am-piangonana no anaovana izany. Mbola mitoetra avokoa ireo fepetra sakana ara-pahasalamana rehetra amin’ny ady amin’ny fihanaky covid-19 any am-piangonana ho an’Antananarivo Renivohitra sy Analamanga toy ny fanasana tanana…R.Nd. L’article Prefektiora: “Henjanina ny sazy… a été récupéré chez Newsmada.
Antoko Marina : “Mila olona kinga fiasa ny Antenimierandoholona vaovao”
Hijoro ato ho ato ny Antenimierandoholona vaovao. Hanao ahoana? Mila olona kinga fiasa, raha ny fijerin’ny mpandrindra ny antoko Marina, Ranaivoson Désiré.“Asan’olona 150 ny hololohavin’ny olona 18. Faharoa, asan’ny vaomiera 30, tsy mihoatra ny efatra ny vaomiera azo hatsangana amin’izao isan’ny loholona izao. Mila olona kinga fiasa izay, olona manan-tsaina mahalala sy mandinika ary lalin-tsaina.” Io ny fanehoan-kevitry ny mpandrindra ny antoko Marina, Ranaivoson Désiré, momba ny ho fomba fiasan’ireo Antenimierandoholona vaovao amin’izao.Ny Antenimierandoholona no mpanolotsain’ny fahefana mpanatanteraka. Izay maha mpanolotsaina izay, mety tsy voatery hipetraka intsony ny tsy fitovian-kevitra fa ahoana no hikaonan-doha hahazoana mamaha ny olana samihafa? Miandry ny Antenimierandoholona vaovao sahady amin’izao fotoana izao, ohatra, ny “Raharaha volamena 73,5 kilao”.Ahoana koa, ohatra, ny hevitry ny Antenimierandoholona ny amin’ny vidim-piainana mampikaikaika ary tsy zakan’ny vahoaka malagasy intsony amin’izao? Inona ny soso-kevitra homeny ny mpanatanteraka? Ahoana ny fiatrehana krizy toekarena nateraky ny olana fahasalamana? Satria amin’ity taona ity vao ho tsapa ny fidonan’ny krizy tamin’ny taon-dasa.Mila mpanohana parlemantera manana traikefa“Tsy tokony ho “assistant” parlemantera akamakama sy fianakaviana intsony fa tokony hisy fepetra ny olona hapetraka amin’izany”, hoy ihany izy. Olona manana ny traikefa sy fahaiza-manao hanatanteraka ny asan’ny parlemantera ambaratonga voalohany: vao tonga ny lalàna, mamaky avy hatrany ary mijery ny lafin-javatra samihafa izy ireo hahazoan’ny loholona mahita ny lalana hampandrosoana ny firenena. Olona tena hiasa be amin’ny loholona izany izy ireo. Raha mbola maivana, ohatra, ny mpanohana ny parlemanta, tena tsy hisy vahaolana.R.Nd. L’article Antoko Marina : “Mila olona kinga fiasa ny Antenimierandoholona vaovao” a été récupéré chez Newsmada.
Fasan’ny karana: raisina vonjimaika ireo mpifindra monina
Nidina teny amin’ny Fasan’ny Karana, omaly, ny tompon’andraikitra avy amin’ny minisiteran’ny Mponina sy ny BNGRC ary ny ATT ka tapaka fa hisy toerana manokana andraisana ireo mpila ravinahitra avy any Atsimo, izay tonga ao amin’ny fitobian’ny fiara any amin’ny Fasan’ny Karana.Omena sakafo ireo mpifindra monina ka ny fitaleavam-mparitry ny minisiteran’ny Mponina eto Analamanga no mikarakara izany. Tanjona ny hanamorana ny fitobian’izy ireo anaty fotoana voafetra. Namelatra tranolay vaventy ny BNGRC hahafahan’ireo mpifindra monina matory. Efa misy toeram-pidiovana sy savony ihany koa satria mbola tena ao anatin’ny ezaka fifehezana rahateo ny valanaretina i Madagasikara, ankehitriny, raha ny filazan’ny tompon’andraikitra ao amin’ny BNGRC.Nanome sakafo sy fitaovam-pandrahoana ihany koa ny BNGRC. Mivoatra sy miovaova ny isan’ny olona mitoby ao amin’ny Fasan’ny Karana. Manodidina ny 200 ka hatramin’ny 400 ny olona heverina raisina eo an-toerana.Misy ny fandaminana ataon’ny kaoperativa maromaro ao an-toerana amin’ny fandrindrana ireo olona mitoetra vonjimaika ao.Voafetra ihany ny fotoana hijanonan’ireo olona ao amin’ny Fasan’ny Karana arakaraky ny fandehanan’izy ireo mila ravinahitra any amin’ny faritra hiasany. Tsy ho amam-bolana, araka izany, ny hijanonany eo, raha ny fanazavana hatrany.Tranga fahita isan-taona ny firodorodon’ny olona avy any atsimo hitady ravinahitra mianavaratra. Nanamafy ny tranga nisy ny fisian’ny kere ka nampitombo ireo mpifindra monina avy any atsimo ireo.Nilaza ny avy amin’ny ATT fa hapetraka ny “guichet unique” ao amin’ny kaoperativa eny amin’ny Fasan’ny Karana handray ireo olona avy any atsimo, izay migadona eto Antananarivo. Tanjona ny hahafantarana ny antontan’isan’izy ireo. Hahafahana mampandre rahateo ireo faritra andehanany hahafahan’ny manam-pahefana miomana amin’ny fandraisana izany.Tatiana AL’article Fasan’ny karana: raisina vonjimaika ireo mpifindra monina a été récupéré chez Newsmada.
Frantsa: Nahazo ny «Trophée des champions» i MathyasNorombahin’ny Paris St Germain ny «Trophée des champions», tao Frantsa. Resiny tamin’ny isa 2 no ho 1, ny alarobia lasa teo, ny Olympique de Marseille. Baolina tafiditr’i Mauro Icardi sy ny an’i Neymar Jr. Dimitri Payet kosa no nahafaty ny baolina tokana ho an’ny Marseillais. Anisan’ireo nibata ny amboara sy nahazo medaly ihany koa Randriamamy Mathyas, mpiandry tsatoby fahatelon’ny PSG, sady mpilalao fiandry an’ny Barea de Madagascar. Marihina fa izy izany no mpiandry tsatoby malagasy voalohany, nahazo io amboara io. Fanimpolony kosa no nahazoan’ny PSG io “Trophée des champions” io.Fampodiana an’i Gôly BeHo tonga amin’ny 23 janoary ny razanaNoho ny ezaka nataon’ireo mpilalao fahiny nandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy (Scorpions, Club M, Barea de Madagascar) sy ireo mpitia baolina kitra, niaraka tamin’ireo mpanakanto nanao tsipaipaika, feno ny vola ilaina amin’ny fampodiana ny nofo mangatsiakan-dRafalimanana Ferdinand (Gôly Be) an-tanindrazana. Teo ihany koa ny tolo-tanana, nataon’ireo mpilalao malagasy, mipetraka any Frantsa, nanampiana ny vola voangona teto Madagasikara. Araka izany, ho tonga amin’ny 23 janoary ho avy izao ny razana ary efa vita ny famandrihana amin’ny fiaramanidina. Tsiahivina fa halevina any Mandritsara, faritra Sofia, i Gôly Be. Nangonin’i Tompondaka L’article Vaovaon’ny kitra a été récupéré chez Newsmada.
Safidin’ny filoham-pirenena: ahitana mpitsara telo sy vehivavy iray ireo loholona enina voatendry
Nivoaka, omaly, ny fanendren’ny filoham-pirenena ireo loholona miisa enina, araka ny didim-panjakana laharana 2021-060.Anisan’izany ny sekretera jeneraly am-perinasa an’ny minisiteran’ny Fitsarana sady mpitsara,Imbiki Herilaza. Mpitsara koa ny iray sady hany vehivavy tokana amin’ireo notendrena, Randriamanantenasoa Landy Mbolatiana. Mpitsara eo anivon’ny Tendrom-pitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac) anisan’ny notendren’ny filoha ho loholona Andrianandrasana Hajaniaina Tahina.Minisitra sy depiote teo alohaManampy azy ireo ny minisitry ny Fanatanjahantena teo anivon’ny governemantan’ny fampiraisam-pirenena, ny taona 2011, i Ndremanjary Jean André. Efa minisitry ny Fampianarana ambony koa taty amin’ny taona 2012.Voatendry koa ny depiote teo aloha, i Tsiebo Mahaleo Richard Victor. Nisolo ny toeran’ny depiote Tinoka Roberto teny Tsimbazaza rehefa voatendry ho minisitra izy tamin’ny fe-potoam-piasan’ireo solombavambahoaka teo aloha. Talen’ny fampiroboroboana ny fiaraha-miombona antoka eo anivon’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fantanjahantena (MJS) ny tenany nialoha izao fanendrena izao.Hanova ny fitsipika anatinyAnisan’ny voatendry koa ny talen’ny fifandraisana amin’ny andrimpanjakana eo anivon’ny CUA, Ramanambintana Richard Barjohn. Filoha mitarika ny “Isika fikambanana manohana an-dRajoelina Andry – IFI” ny tenany.Hivory avy hatrany izy ireo, anio, handinika ny fitsipika anatiny eo anivon’ny Antenimierandoholona. Miainga avy amin’izany koa ny hifidianana handrafitra ny ho birao maharitra sy ireo vaomiera samihafa.Synèse R. 1- Imbiky herilaza2- Randriamanantenasoa Landy4- Ndremanjary Jean André5- Tsiebo Mahaleo6- Ramanambintana Richard L’article Safidin’ny filoham-pirenena: ahitana mpitsara telo sy vehivavy iray ireo loholona enina voatendry a été récupéré chez Newsmada.
Mbola tia milalao saribakoly ihany !: tsy afa-bela ny kolontsain’ny tany voazanaka
Singa fototra iray lehibe mampijoro ny firenena ny kolontsaina. Noho izy tsy voateny loatra, zary takona ao ambadiky ny zavatra hafa izay maha zava-dehibe azy izay. Ao aza moa ireo tsy manisy lanjany azy io akory hany ka hararaotin’ny sasany.Saika nomena na naverina tamin’ny taona 1960 ny ankamaroan’ny fahaleovan-tenan’ireo firenena nozanahina indrindra fa ny taty amin’ny kaontinantan’i Afrika. 61 taona aty aoriana, mbola afaka milalao ny saribakoliny ihany ry zareo vahiny. Eo ny lafiny politika fa tsy azo atao ambanin-javatra ihany koa ny kolontsaina. Rehefa avy nopotehin-dry zareo tao anatin’ny 400 taona mahery ny kolontsain’ny tany voazanaka, mbola nahitany hirika ihany ny hanohizana izany. Toa efa vita lamina ela ilay paikady satria tsy mifankaiza fa mitovitovy avokoa ny endrika isehoany isam-pirenena.Habokainy, vetavetainy, lotoiny, haratsiany, sns, ny kolontsain’ilay tany zanahina. Avy eo, aderaderany ny azy. Dokafany, indraindrainy, afangarony amin’ny kolontsina any amin’ny tany idirany, hamafazany lainga sy antsanga tsy aman’orana… Dia roboka manaraka izany ihany koa ny tompon-tany sasany. Miainga eny amin’ny ankizy ilay fandrebirebena, mipaka hatrany amin’ny lehibe, rehefa avy nahazo faka lalina eo anivon’ny tanora.Vokatr’izay, nanjary tsy mahafantatra, tsy tia, mamkahala ny kolontsainy ny firenena voazanaka. Nitombo isa ny saribakolim-bahiny. Nitombo isa sy sehatra ivelarana nanaraka izany ihany koa ireo kolontsaina tsy manam-pototra sy mitsingevana.Azon-doza hatrany amin’ny avarapianaranaTsy ny eto an-toerana ihany no iharan’izany fa na ireo Malagasy monina (miasa na mianatra) any ivelany ihany koa aza. Hoy i E.D Andriamalala, raha nilaza momba io tranga io : « Tsy mitovy hevitra aminareo mpianatra avy any an-dafy aho! Hoy aho… Fa raha mbola any ianareo be rehaka sy milokaloka ny hisotro ny “aleoko maty” nefa nony tafaverina aty Madagasikara, ka mahazo toerana ambonimbony sy karama be, dia vonona hanao sorona ny mpiray firenena aminareo mba ho fandriampahaleman’ny vady aman-janakareo: ny kibonareo voky sy noana no famantaranandron’ny fitiavanareo Tanindrazana. (boky : Fofombadiko Pejy 68).Raha io nambaran’ity andrarezin’ny asa soratra malagasy ity no halalinina, mbola manana saribakoly azo lalaovina avy amin’ireo avarapianarana ihany koa ny mpanjanaka. Mbola resaka kolontsaina ihany koa izany. Ireo voavolavola tao anatin’ny kolotsaina malagasy, miraikitra tahaka ny tandra vadin-koditra eo aminy ny fitiavan-tanindrazana ka na aiza na aiza toerana misy azy, na inona na inona fari-pahaizany, tsy miova io.… Matoa mbola afaka milalao saribakoly tahaka izany ny vahiny, mbola misy saribakoly azony lalaovina ao amin’ilay firenena nomeny fahaleovantena. Raha izany tokoa ny marina, rahoviana no ho tonga lahy antitra na vavy antitra tsy hilalao saribakoly intsony ireo firenena mpanjanaka ireo?HaRy RazafindrakotoL’article Mbola tia milalao saribakoly ihany !: tsy afa-bela ny kolontsain’ny tany voazanaka a été récupéré chez Newsmada.